वीरगञ्ज जलमग्न : रू. ३ अर्बको योजनाले पनि दिएन निकास
वीरगञ्ज । वीरगञ्जमा एशियाली विकास बैंक (एडीबी)को मुख्य लगानीमा ढल तथा नाला निर्माण परियोजना लागू भएपछि यो शहरले वर्षौंदेखि भोग्दै आएको डुबानको समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, ३ अर्ब रुपैयाँ खर्चिएर यो परियोजना पूरा भए पनि वर्षाको पानीले निकास पाएन । वर्षाका कारण शनिवार दिनभरि मुख्य बजार...
कम्तीमा आठ लिटर दूध विक्री गर्ने कृषकलाई पुरस्कार !
असार २७, बर्दिवास । महोत्तरी जिल्लाको औरही नगरपालिकाका दुग्ध उत्पादक किसान अब पुरस्कृत हुने भएका छन् । नगरपालिकाको भर्खरै सम्पन्न चौथो नगरसभाले आफूले पालेको गाई, भैंसीबाट दैनिक कम्तीमा आठ लिटर दूध उत्पादन गर्ने किसानलाई वर्षेनी रू. २५ हजार पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो । नगरसभाको यो निर्णयल...
राजविराज (अस) । हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत राजविराज खण्डमा १ दर्जन पुलको निर्माण अझै पूरा भएको छैन । निर्माण सम्झौता भएको ५ वर्षमा पनि पुल निर्माण अधुरै रहेको हो । उक्त राजमार्गअन्तर्गत जिल्लाका पाँची, कजराधार १, २, मुतनी, नयाँ पम्प, कठहा, बिहुललगायत १ दर्जन पुलको ठेक्का एउटै निर्माण कम्पनीले बताइएको...
प्रदेश नं २ सरकारद्वारा आफ्नै प्रदेश विकास बैंक स्थापना गर्न पहल
असार २४, जनकपुरधाम । प्रदेश नं २ को सरकारले आफ्नै स्वामित्वमा प्रदेश विकास बैंक स्थापना गर्ने भएको छ । उक्त बैंक स्थापनाका लागि गृहकार्य गर्न प्रदेश नीति आयोगका उपाध्यक्ष डा हरिवंश झाको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलको सदस्यमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव प्रेमकु...
वीरगञ्ज (अस) । वीरगञ्ज महानगरपालिकाका पदाधिकारीले चालू आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा सञ्चालित विकास योजनाहरूको स्थलगत अनुगमन गरेका छन् । महानगरमा प्रदेश सरकार र संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित विकास योजनाहरूको सोमवार अनुगमन गरिएको हो । महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उमेश बस्नेतले विकास...
सप्तरीमा ३% मात्र धान रोपाइँ
सप्तरी । पर्याप्त वर्षा नहुँदा सप्तरीमा हालसम्म ३ प्रतिशत मात्र धान रोपाइँ भएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र राजविराजका प्रमुख वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत भगीरथ यादवले सिँचाइ अभाव र समयमै वर्षा नहुँदा थोरै क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ भएको बताए । सप्तरीमा सिँचाइ पुगेको ४० हजार हेक्टर र सिँचाइ नपुगेको ३० हजार हेक्...
जलेश्वर भन्सारको राजस्व लक्ष्यभन्दा बढी
जनकपुर (अस) । जलेश्वर भन्सार कार्यालयले चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को ११ महीनामा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ । यो भन्सारलाई २ अर्ब ८ करोड रुपैयाँको लक्ष्य दिइएकोमा २ अर्ब ३९ करोड ३७ लाख रुपैयाँ संकलन भएको भन्सार अधिकृत गणेश पौडेलले बताए । संकलित राजस्वमध्ये भन्सार महशुलतर्फ ६३ करोड रुपैयाँ स...
खानेपानी संस्थालाई ५ ओटा जेनेरेटर हस्तान्तरण
असार २२, बारा(अस) । निजगढ नगरपालिकाले नगरका पाँच ओटा खानेपानी उपभोक्ता संस्थालाई जेनेरेटर बितरण गरेको छ । एक कार्यक्रमको आयोजना गरी नगरपालिकाले कुल रू. ३३ लाख ८४ हजार ३५०को बजेटमा पाँच ओटा जेनेरेटर खरीद गरी वितरण गरेको हो । खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था निजगढ, बरमबाबा खानेपानी समिति, भरतगंज सि...
नहरले पानी नदिँदा धानखेती प्रभावित
सप्तरी (अस) । सिचाइँ सुविधा भए पनि नहरमा पानी नछोडेका कारण सप्तरीमा धान रोपाइँ प्रभावित भएको छ । जिल्लामा कुल खेतीयोग्य जमीनको आधाभन्दा बढी नहरबाट सिँचाइ हुने गरेको छ । सिँचाइ तथा पानी अभावले जिल्लामा ३ प्रतिशत मात्र धान रोपाइँ भएको कृषि ज्ञान केन्द्र राजविराजले जानकारी दिएको छ । जिल्लाको ४० हजार ह...
रौतहट (अस) । रौतहटका विभिन्न गाउँमा पूर्वाधार निर्माणले तीव्रता पाएको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम चरणमा आएर पूर्वाधार निर्माण धमाधम अघि बढेको हो । जिल्लाका स्थानीय तहमार्फत सञ्चालित अधिंकाश योजना तथा कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेका छन् । तर संघीय तथा प्रदेश सरकारका योजनाका काम भने निर्माणकै क्रममा छन् । स्थ...